पीसी को लागी ShareMe (2021) - विन्डोज को लागी नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् 10/8/7
पीसी को लागी ShareMe (2021) – विन्डोज को लागी नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् 10/8/7
मार्च 3, 2021 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
1 पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागी शेयरमे (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
1.1 पीसी विन्डोजको लागि सेयरमे डाउनलोड गर्नुहोस्7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
1.2 पीसी विन्डोजमा सेयरमे अनुप्रयोगको सुविधाहरू
2 कसरी पीसी विन्डोजमा सेयरमे डाउनलोड र स्थापना गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
3 पीसीको लागि सेयरमेय डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
3.1 मेरो साइटबाट अधिक
पीसी विन्डोज xp / 7/8 / 8.1 / 10 को लागी शेयरमे (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
पीसी को लागी ShareMe - केटाहरु!! If you have no idea about how to use शरमे तपाईंको पीसी विन्डोजमा 10/8/8.1/7, यदि हो भने यो तपाइँको लागि लेख हो.
यस लेखमा, तपाईं कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पीसी को लागी ShareMe, ल्यापटप, र डेस्कटप को लागी सित्तैमा.
चरण विधि चरण, मैले डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि व्याख्या गरेको छु पीसी विन्डोजको लागि सेयरमे 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, र विन्डोज 10 (32 बिट - 64 बिट).
अब, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download ShareMe For PC (विन्डोज 10, 8,7र म्याक) यसलाई जाँच गरौं ...
पीसी को लागी अधिक अनुप्रयोग जाँच गर्नुहोस्
पीसी को लागी Okcredit
पीसी को लागी स्टारमेकर
विन्डोजहरूको लागि चमत्कार 7
पीसी को लागी टिक टोक डाउनलोड गर्नुहोस्
vpn मास्टर पीसी
https // aka.ms / रिमोटकनेक्ट
Windows को लागि फेसटाइम 7
पीसी को लागी tiktok अनुप्रयोग
सेयरमे डाउनलोड गर्नुहोस् पीसी विन्डोज को लागी7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
ShareMe नम्बर हो 1 फाईल साझा गर्ने अनुप्रयोग विश्वव्यापी रूपमा. सामसु including सहित सबै Android उपकरणहरूमा काम गर्दछ, वनप्लस, ओप्पो, शाओमी, Vivo, RealMe, LG, र अधिक.
ShareMe अनुप्रयोग – एक विज्ञापन-रहित P2P फाईल ट्रान्सफर उपकरण जसले इन्टरनेटमा जडान बिना काम गर्दछ. धेरै 200 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई नम्बर बनाउँदैछन् 1 विश्वमा डाटा साझेदारी अनुप्रयोग.
शेयरमे एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुप्रयोग पीसी को लागी ShareMe अनुप्रयोग
अद्यावधिक गरियो7अगस्त 2020
आकार उपकरणको साथ फरक हुन्छ
हालको संस्करण उपकरणको साथ फरक हुन्छ
एन्ड्रोइड आवश्यक छ 4.4 र माथि
द्वारा प्रदान गरिएको शाओमी इंक.
अनुकूलता विन्डोज १० / .1.१ / / / / / भिस्टा र म्याक ओएस एक्स 10.11
सेयरमे एप्लिकेसन एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध छ त्यसैले तपाईं यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. तल आधिकारिक डाउनलोड लिंकहरू प्राप्त गर्नुहोस्:
गुगल प्लेमा सेयरमे
पीसी विन्डोजमा सेयरमे अनुप्रयोगको सुविधाहरू
सेयरमे सरल & द्रुत डाउनलोड!
सबै विन्डोज संस्करणहरूको साथ काम गर्दछ!
ShareMe पछिल्लो संस्करण!
विन्डोजको साथ पूर्ण रूपमा फिट 7/8/10 अपरेटिंग प्रणाली.
सबै Android उपकरणहरूको समर्थन गर्नुहोस्
सबै प्रकारका फाईलहरू पठाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्
यसमा फाईलहरू साझेदारी गर्नुहोस् 1 क्लिक गर्नुहोस्, जटिल चरणहरू बिना
सहज र प्रयोगकर्ता मैत्री UI.
मोबाइल वा इन्टरनेट डाटा उपयोग बिना फाइलहरू साझेदारी गर्नुहोस्
200 ब्लुटुथ भन्दा छिटो पटक, उच्च गति speed०M / s मा जान्छ
कसरी पीसी विन्डोजमा सेयरमे डाउनलोड र स्थापना गर्ने 10/8.1/8/7 र म्याक?
अहिलेको रूपमा, विन्डोज पीसीको लागि सेमेमीको आधिकारिक अनुप्रयोग वा सफ्टवेयर विकसित छैन. विन्डोज कम्प्युटरमा सेयरमी स्थापना गर्नका लागि एक मात्र तरीका एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गरेर हो.
त्यहाँ पीसीमा सेयरमे स्थापना गर्न दुई तरिकाहरू छन्:
ब्लूस्ट्याक्स अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा सेयरमे डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा सेयरमे डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्
Bluestacks प्रयोग गरेर पीसीको लागि सेयरमे डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्नका लागि चरणहरू:
ब्लूस्ट्याक्स डाउनलोड गर्नुहोस्
सबै भन्दा पहिले, डाउनलोड गर्नुहोस् Bluestacks इमुलेटर र आफ्नो पीसी वा ल्यापटप मा bluestacks 4..exe फाइल स्थापना गर्नुहोस्.
एक पटक यो इमुलेटर सुरू भयो, र कृपया मेरो एप्स बटनमा क्लिक गर्नुहोस्.
कृपया ShareMe को लागी खोजी गर्नुहोस्.
तपाईले यस सेयरमे अनुप्रयोगको लागि खोजी परिणामहरू देख्नुहुनेछ. स्थापना क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईको गुगल खातामा लग इन गर्नुहोस् ब्लूस्ट्याक्समा गुगल प्लेबाट यो सेयरमी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न.
ShareMe अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई तुरून्त प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्.
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीको लागि सेयरमे डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्नका लागि चरणहरू :
Nox अनुप्रयोग प्लेयर डाउनलोड गर्नुहोस्
सबै भन्दा पहिले, स्थापना गर्नुहोस् Nox अनुप्रयोग प्लेयर तपाईंको पीसीमा
यसलाई स्थापना पछि, पीसीमा Nox अनुप्रयोग प्लेयर चलाउनुहोस् र तपाईंको गुगल खातामा लग इन गर्नुहोस्.
अब ShareMe अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्नुहोस्.
तपाइँको Nox इमुलेटरमा सेयरमी अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्
स्थापना पूरा भएपछि, तपाईं आफ्नो पीसीमा सेयरमे एप चलाउन सक्नुहुनेछ.
पीसीको लागि सेयरमेय डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, म आशा गर्छु कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्नेछ विन्डोज र म्याकको लागि सेयरमे अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्. अझै, यदि तपाइँसँग उही सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया दयालु मा साझा टिप्पणी बाकस. थप, तपाईलाई अझ सामान चाहिन्छ, त्यसो भए मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. म तपाईलाई सहयोग गर्न सँधै खुशी छु.
मेरो साइटबाट अधिक
Microsoft Safety Scanner For PC Windows 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
विन्डोजको लागि पीसीको लागि टर्बो वीपीएन डाउनलोड गर्नुहोस् 10, 7, 8 र म्याक
पीसी विन्डोज को लागी Playnite 10/8/8.1/7 - नि: शुल्क डाउनलोड पछिल्लो संस्करण
पीसीमा एपीके सम्पादक डाउनलोड गर्नुहोस् (विन्डोज 10, 8, 7, म्याक)
iMyFone LockWiper For Pc Windows 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: पीसी को लागी ShareMe